महिनावारी भएको बेला पुजापाठ गर्न, मन्दिर जान हुन्छ कि हुँदैन ? एक पटक अवश्य पढ्नुहोस् – Khabaarpati
January 6, 2021 January 6, 2021 goodmamLeaveaComment on महिनावारी भएको बेला पुजापाठ गर्न, मन्दिर जान हुन्छ कि हुँदैन ? एक पटक अवश्य पढ्नुहोस्
यदि नारीले हिन्दु धर्म संस्कार संस्कृती जोगाउन नसके एउटा युग गुमाउनेछन् । तिमी महिनावारीमा अछुत वा अयोग्य हुदैनौ तिमी मन्दिर भन्दा पवित्र हुन्छौ । मन्दिर बनाउने मान्छे जन्माउने पनि तिमी/नारी हौ । तिमी जुनसुकै बेला मन्दिर जान सक्छौ । किन नजान भनियो फरक कोणबाट हेर्न सक्छौ । हिजो कुन अभ्यास थियो त्यसलाई जानेर बुझेर मात्र प्रश्न गर । राम्रो लागेमा अवश्य शेयर गर्नुहोला ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
अग्लो रुखको टुप्पोमा एक महिला उभिएको दृश्य क्यामेरामा कैद भएपछि (भिडियो सहित)